လေ့ကျင့်ခန်းက အိုရွယ်ချိန် ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးနိုင် - Yangon Media Group
လေ့ကျင့်ခန်းက အိုရွယ်ချိန် ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်
အသက်အရွယ် အိုမင်းလာချိန်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းများစွာပြုလုပ်ခြင်းက ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ ရောဂါကူးစက်မှုကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင် ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါ အသက် ၈ဝ အရွယ်ရှိသူ အချို့ သည် ခရီးဝေး စက်ဘီးစီးနင်းခြင်းဖြင့် အသက် ၂ဝ အရွယ်ရှိ ကိုယ်ခံအားစနစ်မျိုး ရရှိနေ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။
လန်ဒန်ကင်းကောလိပ်မှ အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ပါမောက္ခနော်မန်လာဇာရပ်စ်၏ အဆိုအရ လေ့ကျင့်ခန်းသည် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သင့် ကြောင်း၊ လူတို့၏ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့်ြ<ွကက်သားများအတွက် စိတ်နှင့်ခန္ဓာအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းက အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သုတေသနပြုမှုကို Aging Cell ဂျာနယ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ လူတို့တွင် အသက် ၂ဝ အရွယ်မှစတင်၍ ကိုယ်ခံအားစနစ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းကြောင်း အသက်အရွယ် အိုမင်းလာချိန်တွင် ပိုမိုသိသာကြောင်း၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းမှုကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားစေကြောင်း၊ စက်ဘီးစီး လေ့ကျင့်ခန်းက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းချိန်တွင် T-cells ကို ထုတ်လုပ်ပေးသောဂလင်းသည် ပမာဏ သေးကျုံ့သွားကြောင်း၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းချိန်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြုခြင်းက ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
"လက်ကျန်နှစ်ပွဲစလုံး အနိုင် ယူဖို့ လုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်း ရှိပါတယ်" အောင်သူ
အသက်အရွယ် အိုမင်းချိန်တွင် ကြွက်သားများ ဆုံးရှုံးမှု၊ နာ့ဗ်ကြောစနစ် အချက်ပြမှု နည်းပါးလာခြင်
လိဂ်ဖလားပွဲမှ VAR အသုံးပြုမှုကို ဆာရီနှင့် ပိုချက်တီနိုတို့ ဝေဖန်
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် မတ်လမှစတင်ပြီး ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော ဆေးဝါးနှင့် ဖြည့်စွက်စာများတွင် မြန်မ??
ဂျပန်အဓိက အတိုက်အခံပါတီ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံများ ပူးပေါင်း၍ အာဘေးအစိုးရကို အန
သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုများ ကျယ်ပြန့် မလာအောင် တိကျပြင်းထန်သော ဥပဒေဖြင့် အရေးယူရန် အမျိုးသမီး စီး?
လမင်းသာ(၂) စားသောက်ဆိုင်တွင် ဆရာတော် အရိုက်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရား ပေါ်ပေါ?